Single Lane Bottom Sealing Bag စက် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ဝေသူနှင့်စက်ရုံမှ Single Lane Bottom Sealing Bag စက် အကြောင်းသင်သိရန်လိုအပ်သည်။
ပုံစံ - SC Series
စျေးဝယ်အိတ်များနှင့် ရိုးရိုးအိတ်များအတွက် Seal bar ကို အလွယ်တကူ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။.
အီလက်ထရွန်းနစ် clutch နှင့် ဘရိတ်များသည် အိတ်ကို ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် အလုံပိတ်ခြင်းတို့ကို သေချာစေသည်။,1mm အတွင်းသွေဖည်.
အမျိုးအစား SC-700V 1x680x1200 0.008~0.15 30~160 6.9KW 3.၈x၁.၅၅x၁.49
SC-800V 1x780x1250 7.3KW 3.၈x၁.၆၅x၁.49
SC-1000V 1x980x1450 9.0KW 3.၈x၁.၈၅x၁.49
2x305x1200 30~၁၆၀x၂ 7.4KW 3.၈x၁.၅၅x၁.49
2x355x1250 7.8KW 3.၈x၁.၆၅x၁.49
၂x၄၅၅x၁၄၅၀ 9.5KW 3.၈x၁.၈၅x၁.49
အမျိုးအစား SC-700 1x680x1010 0.008~0.၁၅ 30~110 3.8KW 3.၈x၁.၅၅x၁.49
SC-800 1x780x1010 4.2KW 3.၈x၁.၆၅x၁.49
SC-1000 1x980x1010 30~105 4.4KW 3.၈x၁.၈၅x၁.49
2x305x1010 30~၁၁၀x၂ 4.3KW 3.၈x၁.၅၅x၁.49
2x355x1010 30~၁၀၅x၂ 4.7KW 3.၈x၁.၆၅x၁.49
2x455x1010 4.9KW 3.၈x၁.၈၅x၁.49
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.carrybagmachine.com/my/single-lane-bottom-sealing-bag-machine.html
SHENG-FON PLASTIC MACHINE CO., LTD. အဓိကထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည် Taiwan။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပို့ကုန်အတွက်အထူးပြု Single Lane Bottom Sealing Bag စက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခိုင်မာတဲ့ OEM / နှစ်ဖွဲ့စွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်စာနာန်ဆောင်မှုမှအကျိုးခံစားရဖို့, today.We စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ဖန်တီးရန်နှင့် client အားလုံးနှင့်အတူအောင်မြင်မှုမျှဝေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ ပိုပြီးစတိုင်များကျေးဇူးပြုပြီးချင်တယ် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ အခုချက်ချင်း!
အကောင်းဆုံး Single Lane Bottom Sealing Bag စက် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် Single Lane Bottom Sealing Bag စက် မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ